Nepal Samaya | बनारसमा मानिसको जाम छिचोल्दा
दिनेश श्रेष्ठ | काठमाडौं, शनिबार, जेठ १४, २०७९
शनिबार, जेठ १४, २०७९, काठमाडौं
गंगा किनारमा आरतीदर्शनका लागि जम्मा भएको भिड।
देश स्थानीय चुनावमा होमिएका बेला म भने १६ वैशाखमा सपरिवार भारत भ्रमणमा निस्किएँ। हाम्रो पहिलो गन्तव्य मुम्बई थियो। भारतकै सबैभन्दा ठूलो सहर, जहाँ कलाकार बन्नकै लागि दैनिक सयौं मानिस पुग्छन् भनिन्छ। हाम्रो उद्देश्य भने त्यहाँ दिन बिताउने मात्र थियो।
इस्कोन मन्दिर मुम्बई।
होटल ताज प्यालेस मुम्बई।
इलिफेन्ट केभ मुम्बई।
मुम्बईमा हामीले गेटवे अफ इन्डिया, इलिफेन्टा केभ, जुहु बिच, स्कोन मन्दिरको यात्रा गर्यौँ। भारतकै ठूलो सहर मुम्बई अर्थात् ‘सिटी अफ अटो’ को तीन दिने यात्रापछि हामी दक्षिण पूर्व भारतको तामिलनाडू राज्यमा पुग्यौँ।
कल्पना गरेको भन्दा धेरै सफा रहेछ, तामिलनाडू। लगभग नेपालजस्तै। नेपालको जस्तै पहाड, जंगल र मैदान भएको क्षेत्र। त्यहाँ हामी सद्गुरु (जग्गी वासुदेव) को आश्रममा बस्यौँ। तीन दिनको त्यो बसाइले त्यहीँ बसौँ बसौं लागेको थियो।
तमिलनाडूको खुला क्षेत्र।
अध्यात्ममा आस्था राख्ने मानिसहरु त्यहाँ आउने गर्थे। वास्तवमा यो ठाउँ अध्यात्म, विज्ञान, कला र योगको सम्मिश्रण थियो। सद्गुरुको प्रवचन मैले नेपालमै रहँदा पनि सुन्ने गरेको छु। उहाँको आश्रममै आएर सुन्नुको आनन्द त ओहो! म बयानै गर्न सक्दिन।
त्यहाँ देखाइने योग र आश्रममा बनाइएको वास्तुकलाले पनि लोभ्यायो मलाई। आश्रमको कलात्मक अधियोगीले मोहित पारेको थियो। रातको समयमा यसले अझ मनमोहक लाग्थ्यो।
जग्गी वासुदेव आश्रमको अधियोगी।
दुर्भाग्य भनौँ वा के! मोबाइल प्रयोग गर्न नपाइने थुप्रै ठाउँ भएकाले मैले फोटो लिन पाइनँ। तीन दिनको आध्यात्मिक यात्रामा धेरै देखियो, भोगियो।
विचलित मनलाई शान्त बनाएर हामी बैंगलोर ट्रान्जिट हुँदै फेरि भारतको उत्तरतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो गन्तव्य थियो, वाराणसी।
बाक्ला घर अनि मानिसहरुको भीडले रुख, जंगल मासिइरहेका थिए। शितल छहारीमा बस्न त लामै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ४० डिग्री तापक्रममा हामी आठ जनाको पारिवारिक टिम आइसक्रिमकै खोजीमा हुन्थ्यौँ।
त्यहाँ एउटा अनुभव भने सुनाउनै पर्ने छ। हामी १५ मिनेट जति त मानिसको जाममा पर्यौँ। मैले यसलाई नाम दिएको छु, ‘बबाल जाम!
यसअघि सवारी जाममा परे पनि मलाई मानिसको जामबारे याद थिएन। तर वाराणसीमा मानिसको जामले चाहिँ हैरानै बनायो।
बल्लतल्ल जामबाट निस्किएका के थियौँ टेम्पो खोज्न उस्तै समस्या आइलाग्यो। दिमाग त सेलाउनै पाएन। मानिसको भीडबाट बल्ल त तंग्रिएका थियौँ। होटल फर्किनका लागि हामीलाई टेम्पो चाहिएको थियो। तर, त्यति धेरै मानिस भएको ठाउँमा टेम्पो कसरी भेट्नु?
अन्जानहरुको भीडमा आँखाको नानी टेम्पोका पाङ्ग्राझैँ वरिपरि दौडिरहे। एक घण्टा दौडिएपछि आँखाका पाङ्ग्रा खाली टेम्पोमा गएर अडिए। त्यो टेम्पो भेट्दा, भगवान् भेटिएझैँ लाग्यो। छेउमा फोहोर गन्हाइरहेको थियो। मैले काठमाडौंलाई सबैभन्दा फोहोर मानेको थिएँ। त्यहाँ त काठमाडौंभन्दा फोहोर रहेछ।
अनि पुराना ढाँचाका घरहरु। त्यति पुराना पनि होइन। ढलानकै भए पनि सानो ठाउँमा कुचुक्क परेका देखिन्थे। त्यहाँको विषेश आकर्षण त आरती नै थियो।
त्यहाँ विशेषतः योजना नै आरती हेर्ने थियो। जमिनमा ठाउँ नभएपछि पानीमाथि बोटमा बसेर हेर्नुपर्ने भयो। हामी आरतीको प्रतिक्षामा खासै बस्नु परेन। ४५ मिनेट हुने आरतीको लागि छ बजे पुगेका थियौँ। त्यसैले पनि आरतीको समीपमा बस्ने भने पाइएन।
गंगा आरती देखाउँदै पूजारी।
भीडभाड कम छ भने बोट चलाउँदै हेर्न सकिने रहेछ। वरिपरि चलाएर आइसकेपछि रोकेर किनारा लगाएपछि आरती सुरु हुने समय भइसकेको थियो। बोटको चालकले हामीलाई हिन्दीमा त्यहाँको ठाउँको बारेमा सुनाइरहेका थिए। बोट चालकले काशी घाटको वरिपरि बनेका मठ, मन्दिर, घाट र बस्तुकलाबारे जानकारी दिइरहेका थिए। हामीले चालकले भनेका कुरा सुन्दै उनले देखाएका बस्तु नियाल्यौँ।
पाँच जना पुजारी आरती घुमाउन ठिक्क परेर उभिइरहेका थिए। आरती भयो। अगाडि बाला चतुदर्शीमा हामीले पशुपतिमा लिएर जाने गरेको झैँ बत्ति लिएका थियौँ।
गंगा आरती हेर्न पुगेका श्रद्धालुहरू।
राजा, महन्तले बनाएका धेरै घाट बनाएका थिए। त्यहाँ घुम्न जानेहरुले बोटिङ गर्दै घाटहरु हेरिरहेका हुन्थे। दश अश्वमेघ घाटमा हामी पुगेका थियौँ। काशी विश्वनाथ मन्दिर नजिकैको घाटमा थियौँ हामी। एकजना नेपाली महन्थले बनाएको घाट रहेछ त्यो।
विभिन्न राजा, महाराजा र ऋषिमुनिको नाममा हरेक घाटमा फरक फरक दिनमा आरती हुने गरेको रहेछ। त्यहाँ हजारौं मानिस बोटमा बसेर आरती हेरिरहेका हुन्छन्। बोटमा हामीले दुई घण्टाको समय व्यतित गर्यौँ। त्यति समय बिताएको चार सय भारतिय रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। केहि मिनेट बोटको सफारिपछि आरती सुरु हुँदै थियो।
आज गंगा आरती विश्वमै चर्चित रहेछ। यो समयमा गंगामा मानिसहरु स्नान पनि गर्ने रहेछन्। गंगा सागरमा डुबुल्कीकै लागि हजारौं मानिसको भीड हुने रहेछ। गंगालाई ‘त्रिपथ गामिनी’ भनेर चिनिन्छ। यो भनेको तीन लोक (स्वर्ग, मत्र्य र पाताल) हुन्छ। र, तिनै लोकमा गंगा हुने हिन्दू शास्त्रमा लेखिएको मानिन्छ। मानिसको मृत्युपश्चात् पनि स्वर्गमा गंगा भेटिने विश्वासका साथ मानिस गंगास्नान गर्दछन्।
गंगा आरती गर्दै पूजारी।
यो त धार्मिक पक्ष भयो। यस्तो धेरै आध्यात्मिक विश्वासहरु छन्। गंगालाई सबैभन्दा शुद्ध पानीका रुपमा पनि लिइन्छ। तर त्यहाँको वस्तुगत कुरा गर्दा चाहिँ, साँझको समयमा छल्किँदै गरेको पानीमा आरती टल्किएको मैले धेरैबेर हेरेँ।
‘कति मनमोहक,’ त्यो चित्रलाई कैद गर्दै मैले आफैंसँग भनेँ।
आँखा चिम्लेर तवलाको तालमा हात पड्काउँदै अर्कै दुनियाँमा पुग्ने भक्तहरुको ठूलो जमात उपस्थित भएको थियो त्यहाँ। त्यो दुनियाँमा म आफैं पनि पुगेँ।
एकैपटक सुनिने ठूलो स्वरमा आफ्नो पनि गलाको स्पन्दन मिलाउँदा मनको बह पनि कम हुनेरहेछ।
वाराणसीमा मैले दुई कुरा तुलना गरेँ। खानेकुरा सस्तो बस्ने होटेल चाहिँ महँगो। भारतीय रुपैयाँ ७० देखि खाना पाइने रहेछ। तर भारतीय डिसमा खान टेसै नपर्ने। त्यतिबेला मलाई नेपाली दाल भात मिस भयो। र, शान्त वातावरण पनि। काठमाडौं त्यसै पनि कोलाहल लाग्न सक्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर वाराणसीको तुलनामा काठमाडौं धेरै शान्त रहेछ।
टेक्सटाइलमा धनी छ वाराणसी। सबैभन्दा धेरै कुर्ता सलवार अनि साडी उत्पादन गर्ने ठाउँमै पुग्दा त एक भारी कपडा बोकेर ल्याउँ कि भन्ने लोभ पनि पलाउने रहेछ। करण ती कपडाको दाम अत्यन्तै कम। काठमाडौंमा पाउने औसत मूल्यभन्दा तीन गुणा सस्तो।
तर एउटा दृष्य चाहिँ बडा गजबकै थियो। स्कुटर र बाइक आपसमा धेरै ठोक्किने भएकाले सवारीधनीले वरिपरि स्टिलले बेर्ने गरेका रहेछन्। त्यसो गर्दा ठोक्किए पनि सवारीमा चोट नलाग्ने भयो।
वाराणसी घुम्ने सबैभन्दा उत्तम दिन चाहिँ आइतबार रहेछ। सबै पसल बन्द हुने भएकाले मन्दिर जान सजिलो पर्छ। आइतबार चाहिँ वाराणसीमा नेपाल बन्दझैँ सबै पसल बन्द हुने रहेछन्। जाम पनि कम।
सारनाथ घुम्ने योजनामा पनि हामी सफल भयौँ। सारनाथ चाहिँ गौतम बुद्धले पहिलो पटक प्रवचन दिएको ठाउँ हो। त्यसैले त्यहाँको चर्चा विश्वभर छ। विश्वभरका बैद्धिस्टहरुको धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो सारनाथ। त्यसो भएको हुनाले भारतले यो क्षेत्रको प्रचार गर्दै आएको छ।
लुम्बिनीसँग नाम जोडिएर यो क्षेत्र धेरै चर्चित पनि छ। त्यहाँ विहारको संग्रह देख्न पाइन्छ। विहार धेरै भएको कारणले होला, थुम्कै थुम्का भएजस्तो पो देनिन्छ। त्यहाँ रहेको स्तुपा नै सारनाथको मुख्य आकर्षण हो। एक दर्जनजति स्तुपा रहेका छन् होला।
वाराणसीको अर्को विशेषता हो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय। यो विश्वविद्यालय यति विशाल छ कि यसको क्षेत्रफल रिङरोड भित्रको काठमाडौं जत्रै रहेछ।
विश्वविद्यालयको होस्टेलमात्रै छिचोल्न पाँच किलोमिटर पार गर्नुपर्छ भनेर केही वर्षअघि त्यहाँ पुगेर आएका काठमाडौंका एक पत्रकारले सुनाए। तर हामी भने त्यहाँ जान भ्याएनौँ। आज सम्झँदा त्यो मिस भइरहेको छ। वाराणसीबाट हामी रेलमा गोरखपुर, सुनौली नाका हुँदै काठमाडौं फर्कियौँ।
प्रकाशित: May 28, 2022 | 14:51:35 काठमाडौं, शनिबार, जेठ १४, २०७९